Shiinaha 3mm 100% Aluminium silig Aluminium Warshad, Soo-saareyaasha Iyo CE - Tiknoolajiyadda Sifeynta (Zhejiang) Co., Ltd.
Hoyga > Silig sanka > Maaskaro fidsan silig sanka ah > 3mm 100% silig sanka Aluminium ah
Our 3mm 100% silig sanka Aluminium waxaa soo saaray duub. Marka la barbardhigo hal sanka aluminium, waxaa si otomaatig ah loo soo saari karaa, awoodda waxsoosaarkuna waa ku dhowaad saddex jeer ka sarreysa. 3mm 100% siligga sanka ee Aluminium ayaa soo dhaafay baaritaanka SGS iyo CPST, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa N95 waji.
Our 3mm 100% silsiladda sanka aluminium ayaa lagu soo saaray duub. Marka la barbardhigo hal bir sanka aluminium ah, waa la soo saari karaa si otomaatig ah, iyo awoodda wax soo saarku waa ku dhowaad saddex jeer ka sarreysa. 3mm 100% siligga sanka Aluminium ayaa soo maray baaritaanka SGS iyo CPST, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa n95 waji.
Hordhaca wax soo saarka ee 3mm 100% silig sanka Aluminium ah
1.Orkeenna 3mm 100% alsilsiladda sanka ee uminum hase yeeshe ducanka iyo qaabaynta qaabaynta. Waa laaban karaa 10 jeer oo si iskiis ah ayaa loo furi karaa. Markaad lumiso xoog dibedda ah, waxay ka ilaalin kartaa qaabka soo noqoshada.
2. siligga sanka aluminium 3mm 100% waxaa soo saaray duub. Marka loo barbardhigo hal sanka aluminium aluminium ah, waa la soo saari karaa si otomaatig ah, iyo awoodda wax soo saarku waa ku dhowaad saddex jeer ka sarreeya.
2.ProductParameter (Specification) ee 3mm 100% siligga Aluminium
Muuqaalka Wax soo Saarka Iyo Codsiga 3mm 100% siligga sanka Aluminium
Our 3mm 100% silig aluminium aluminium ah wuxuu leeyahay qaab siman, oo aan lahayn guntin iyo ductility wanaagsan. Waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa N95 waji xidho.
Faahfaahinta wax soo saarka ee 3mm 100% siligga sanka Aluminium
Shahaadada Wax soo saarka ee3mm 100% silig sanka Aluminium ah
6.Geli, Rarid iyo u adeegidba3mm 100% silig sanka Aluminium ah
Waxaan ku siin doonaa 7 * 24 saacadood adeeg-raac iyo taageero farsamo ah markaad iibsaneyso 3mm 100% aluminium sanka ah ee shirkadeena, si aadan walwal uga qabin iibka kadib.
1.Q: sidee buundada sanka ee qoqobata u noqoneysaa mas'uuliyad?
2. S: Immisa tan oo buundo ah ooone ah ayaad soo saari kartaa hal maalin?
4.Q: maaskaro N95 ah sanka aluminium ama sanka laba geesoodka ah?
5. S: waa maxay sheygu u fiican yahay buundada sanka ee maaskaro?
J: there are pet, PE and PP raw materials for the nose bridge of mask. Different manufacturers make different materials. The common one is polypropylene hydrocarbon resin (PP). This kind of raw material and metal wire bend and deform with the action of external force, which can maintain the existing excellent performance.